Iyo € 7 iPhone 769 ine mutengo wekugadzira we $ 220 | IPhone nhau
Iyo € 7 iPhone 769 ine mutengo wekugadzira we $ 220
Ini iFoni Phone 7, yekupedzisira Apple smartphone yakaunzwa munaGunyana 7, ine dhizaini yakada kuteverwa kune iyo iPhone yavakaratidza muna 2014. Zvakadaro, maererano IHS, mutengo wayo wekugadzira wawedzera kana uchienzaniswa nemhando dzapfuura, nepo mutengo wayo wekutengesa wakaramba uri munyika umo hapana chakaitika zvine chekuita nemari yaro (mumwe munhu akati Brexit?). Chero zvazvingaitika, zvinoita sekunge Apple ichaenda kutyora.
IHS inoti izvo zvinhu zvinoshandiswa mu7GB iPhone 32 zvine Mutengo wese we $ 220.80 (€ 198,04), $ 36 kupfuura mutengo wekugadzira weiyo 6GB iPhone 16s. Kuti uwane muganho webhizimusi, mutengo wekutengesa muUnited States uri kutariswa, anenge madhora mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ayo achiri kupa kambani yeCupertino mabhenefiti ayo mashoma michina inokwikwidza inopa makambani avo.
7GB iPhone 32 Kugadzira Mutengo Kuputsa
Musiyano wemutengo unouya kunyanya kubva kuzvinhu zvitsva uye matekinoroji senge nyowani taptic injini, makamera matsva uye kuwedzera kwekuchengetedza, izvo zvatinoyeuka zvakabva pa16GB, 64GB uye 128GB kuenda ku32GB, 128GB uye 256GB.
IHS haisati yaburitsa mutengo wekugadzira iyo iPhone 7 Plus, mutengo uyo unofanirwa kuve wakanyanya kutopfuura iwo weiyo 4.7-inch modhi. Iyo 5.5-inch modhi ine hombe skrini uye a mbiri kamera iyo inogona kuve mutengo pa $ 40, nepo iri nyore iPhone 7 kamera, kusanganisira iyo huru uye iyo nyowani 7Mpx FaceTime, yaizotengwa pamadhora makumi maviri.
Pamutengo wemadhora mazana maviri nemakumi maviri emadhora, iwe uchatofanira kuwedzera mutengo wekutakura, kutumira, mitero, kushambadzira, kuvandudza software, uye mihoro yevashandi. Inofungidzirwa kuti iyo purofiti yega yega 7GB iPhone 32 inotengeswa inenge madhora mazana maviri nemakumi mashanu, ingangoita 33% (pasi kubva pa38%). Kunyangwe muEurope takakuvara naBrexit, hazvina kuipa kuziva kuti Apple haina kuratidza kuwedzera kwemutengo wekugadzira muinvoice yekupedzisira, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo € 7 iPhone 769 ine mutengo wekugadzira we $ 220
Panguva ino ivo vapfuura mutengo. Handizive kana vachatengesa zvakawanda asi panguva ino havazovimba neni.
“Pamutengo wemadhora mazana maviri nemakumi maviri emadhora, ungadai uchizofanira kuwedzera mutengo wekurongedza, wekutumira, wemitero, wekushambadzira, wekugadzira software, uye wemihoro yevashandi. «.
Zvakanaka, zvinoita senge zvinonakidza kwandiri kuziva iyo yekugadzira mutengo uye yekupedzisira mutengo, kana chii chiri kutaura, iyo purofiti margin iyo Apple yakasiya neiyo yega yega iPhone ... hapana marara (ndingade kuziva kuti vanoitora kupi iyo mitengo, nekuti ndinofungidzira kuti pachave nemuganhu wekuvanzika mune izvi zvese, fungidzira?). Ndatenda nekuisa!
IPhone 7 ine iOS 10 inotsigira jailbreak
Hutsva betas dzemacOS 10.12.1, tvOS 10.1 uye watchOS 3.1